Kudzidza mimhanzi kunoita kuti uve akangwara here? | Kudzidziswa Kwekuziva
Takambotaura kare nezvezvinogona kubatsira mimhanzi, kunyanya pakudzidza kuverenga (ona apa). Isu takatsanangurawo izvo iyo kushanda ndangariro, L 'ruzivo and the mabasa makuru, sezvataikurukura nezve kukosha kwavo kuchikoro. Zvatiri kutaura nezvazviri nhasi tsvakiridzo yakaenda mberi uye inozofadza vazhinji.
Boka revatsvagiri vechiDutch vakafungidzira kuti kudzidza kwemimhanzi kunogona kuwedzera mabasa epamusoro uye hunyanzvi hwekutaura kwekutaura, zvichitungamira mukuvandudzwa kwechiitiko chechikoro.
Kuedza hypothesis yavo, Jaschke uye vanobatana vakasarudza vana vekutanga vezvikoro zvepuraimari uye vakazvikamura mumapoka mana:
Mapoka maviri evana akagamuchira 1 kana maawa maviri mimhanzi zvidzidzo pavhiki mukati memaawa echikoro
Boka revana rakagamuchira zvidzidziso uye zvinoshanda zvidzidzo zve hunyanzvi hwekuona panguva dzechikoro
Boka revana rakatevera tsika yechikoro chaiyo pasina kuwedzerwa kwemimhanzi kana hunyanzvi hwekuona
Vese vana vakateverwa pamusoro pemakore maviri nehafu. Pamberi pekutanga kwe "kurapwa" kwemazwi enjere bvunzo (WISC-III), visuospatial inoshanda ndangariro uye makuru mabasa (inhibition uye Shongwe yeLondon) kuratidza kuti mapoka aive akanaka uye pakanga pasina musiyano mukuru pakati pawo. Iyo miedzo yakafanana yakazodzokororwa mukati memakore maviri nehafu uye pakapera kosi.
mushure memakore maviri nehafu aya echikoro, tichienzanisa mapoka akasiyana zvakacherechedzwa kuti:
Vana vaive vatora nzira ye hunyanzvi hwekuona yakaratidza kuwedzera kwakakwirira kupfuura vamwe mu visuo-spatial inoshanda memory
Mapoka maviri evana akabatwa kudzidziswa kwemimhanzi vaive vavandudza yavo miedzo mabasa makuru e kungwara kwemashoko
Mapoka ese evana aive atevera nzira ye hunyanzvi hwekuona, vese avo vaitevera kudzidziswa kwemimhanzi avevano zvikoro zvakanaka zvirimo tichienzanisa neboka rinotevedzera rakajairwa chikoro kosi
Kuwedzera kwe mhinduro dzechikoro muvana vakatevera kudzidziswa kwemimhanzi yaioneka yakabatana nekuvandudzwa kwe mabasa makuru
Zvirokwazvo nhau dzakanaka dzinobuda mukudzidza uku. Chekutanga pane zvese, zvinoenderana ne data, zvinoita sekunge kubatikana mumabasa ehunyanzvi (ese anoonekwa uye emimhanzi) ane pesvedzero yakanaka mukuita kwechikoro. Uyezve, inonakidza kwazvo kune avo vanobata neuropsychology, kuita zviitiko zvemimhanzi kwaizowedzera masimba ekuita uye njere dzemashoko (izvo zvichazotungamira mukuvandudzwa pakudzidza kwechikoro).
Nekudaro, sekureva kunoita ivo vanyori, tsvakiridzo iyi ine zvimwe zvaisingakwanise kukurira muzvidzidzo zvichauya. kufananidzira hunyanzvi hakuna kutorwa mukufungwa yevana ava vangangowedzera mwero wekunzwisisa kwezvakawanikwa izvi; Uyezve, zvine chekuita nehungwaru, isu takazvikwanira kune zvinongedzo zvemazwi, ichisiya parutivi hunyanzvi hwekutaura kwekutarisira-nzvimbo, iyo nzvimbo inogona kunge ine chekuita nevana iyo yakanga yatora nzira yehuono.
Kunyangwe zvese zvese isu tinogona kungotarisa zvakanaka pamhedzisiro yetsvagurudzo iyi, tichivimba kuti (kana mhedzisiro yacho ikasimbiswa nekumwe kutsvagisa) tinogona kuwedzera kushandiswa kwezviitiko zvehunyanzvi muzvidzidzo zvechikoro.
Mimhanzi uye dyslexia: kutamba kuverenga zviri nani
Mimhanzi inovandudza mutauro
Rwiyo rwemukati rwekunyora
Iyo komputa kugadziridza kwekutarisa uye kwemasimba mabasa mushure mekuwana kukuvara kwehuropi
TINV, kusiri-kwemashoko ekuzivisa bvunzo
Jaschke, AC, Honing, H., & Scherder, EJ (2018). Yakareba ongororo yemimhanzi dzidzo pamabasa epamusoro mune epuraimari vana vana. Frontiers mune neuroscience, 12, 103.
mabasa makuru, ruzivo, Musica, mimhanzi uye mabasa makuru, mimhanzi nehungwaru
Kufunda mimhanzi kunoita kuti uve nenjere here?2018-04-022020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/04/musica-e-intelligenza.jpg200px200px
Executive mabasa uye utsinye: hukama hupi?Zvinyorwa, mafambiro, Executive mabasa, Executive Mabasa, Neuropsychology